Umfanekiso oqingqiweyo utshintsha imilo ngokuxhomekeke kwikona ejongwa kuyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso eqingqiweyo yekhebula ityhila iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana kuxhomekeke kumbono
Ukujonga phantse yonke into kwaye sinokujonga kwihlabathi liphela elisingqongileyo kwiindawo ezahlukeneyo zokujonga ezisinika ukujonga okuhle okanye okungalunganga. Kwizobugcisa singathetha ngokufanayo ukuba igcisa liyakwazi ukutshintsha umsebenzi okanye into eqingqiweyo ukuze itshintshe imilo njengoko umbukeli esihamba. Iziphumo ezibonakalayo zinokuba neziphumo ezihle ukuba uyayazi indlela yokuyisebenzisa.
Oku kwenzeka ngomkroli waseFrance uMatthieu Robert-Ortis okhe wasebenzisa impembelelo yokujonga kumfanekiso oqingqiweyo omangalisayo Uhlaziyo lwe-Girafes. Kwicala elinye, kuvela iindlulamthi ezintle, kodwa xa ujonga kwenye indawo, iba ngumfanekiso wendlovu enkulu. Yonke into iyatshintsha ngokwembono yombukeli.
Umzobi ngokwakhe uchaza ukuba abantu abaqhelekileyo bathambekele ekujongeni into ephambi kwamehlo abo, nokuba yinto ebonakalayo okanye umbono ongacacanga, kodwa iingqondo zokuyila bahlala behlola ii-angles ezahlukeneyo njengezinye iindlela zokucinga ngento umntu anayo phambi komnye.
UMatthieu Robert-Ortis ukhuthaza abo bajonga umfanekiso wakhe oqingqiweyo ukuba buza iimbono zakho kwaye ujonge okunokwenzeka kwimeko entsha yokujonga. Isindululo sabo beze kubona i Uhlaziyo lwe-Girafes Oku kukutshintsha kwemilo ukusuka kwindlulamthi ukuya kwindlovu enkulu. Umzobo owenziwe ngeentambo kwaye osekwe ngakumbi kumbono wawo kunokwenzeka kobuchwephesha.
URobert-Ortis unayo iwebhusayithi yakho y facebook wakho ukuze ukwazi landela imisebenzi yabo yobugcisa Njengecala lokulala. Kunyaka nje odlulileyo besithetha ngomnye umculi onomdla omkhulu kwizinto ezimelwe yintambo, URichard Stainhorp. Izinto ezivumela ubhetyebhetye obukhulu kunye nokuqina okwaneleyo ukwenza amanani amakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo yekhebula ityhila iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana kuxhomekeke kumbono
Umculi waseUkraine uViktoria Kravchenko uhamba ngepeyinti yehlabathi kwiminyango emnandi kwii-watercolors